Diyaarad ay leeyihiin ciidamadda difaaca Kenya oo burburtay
NAIROBI, Kenya – Diyaarad nooca qumaatiga u kacda ah [helicopter] ayaa Isniinta maanta ah ku burburtay degaanka Kithyoko, ismaamulka Machakos ee dalka Kenya, sidda ay warisay warbaahinta maxaliga ah.
Taliska Ciidamadda Difaaca Kenya ayaa qirtay in diyaaradda ay iyagu leeyihiin. Nooca diyaaradda waa Hughes 500MD. Laba qof oo ahaa duuliyeyaasha ayaa waxaa la xaqiijiyey in ay ku naf-waayeen shilkaan.
Illaa iyo haatan, lama ogga sababta dhabta ah ee keentay in ay soo dhacdo diyaaradda. Balse, saraakiisha waxay sheegeen in ay baaris bilaabeen.
Ciidamada Kenya ayaa inta badan diyaaradaha noocaan ah u adeegsada in ay kusoo daabulaan cunooyinka iyo adeegyadda kale ee muhiimadda u leh iyaga.
Karanja Muiruri, oo kamid ah saraakiisha ciidamadda ee ku sugan Machako, ayaa tibaaxay in ay gurmad deg-deg ah u direen meesha ay wax ka dhaceen kadib markii uu soo gaarey warka burburka diyaarada.
"Abaare 11:30 barqinimo ayuu dhacay shilka, waxaana warbixinta nasoo gaarsiiyey dadweynaha. Ciidamadda gurmadka deg-deg ah waxay ku gaareen meesha muddo 20-daqiiqo ah," ayuu tibaaxay.
Diyaaradda burburtay ayaa kamid ahayd lix xabo oo bishii Janaayo uu taliska kasoo iibsaday Mareykanka, waxaana loogu talagalay in loo adeegsado howlgalada gudaha iyo baacsiga argagixisada.
Bishii lasoo dhaafay ee June 13-keeda ayay ahayd markii diyaarad hilikobter ay shil ku gashay tuulada Kaithe Kithoka ee ismaamulka Meru. Diyaaradaas burburtay waxay ku diiwaan-gishaneyd sumadda 5Y NPW.
Shaqsiyaadkan ayaa laga qaadayaa baaritaan caafimaad oo natiijadiisa la sugayo 14 maalmood.
Kenya oo ka digtay "halista" qorshe ay Itoobiya ka wado Soomaaliya
Afrika 11.11.2019. 11:00
Wargeyska The Star oo xog cusub ku kordhiyey dib u dhigta kiiska badda
Afrika 12.10.2019. 06:20
Madaxa iskuulkii ku burburay Kenya oo maxkamad lasoo taagay
Afrika 28.09.2019. 12:38